Appointy: Zvese-Mu-Imwe Pamhepo Kuronga Zvebhizinesi Rako | Martech Zone
Appointy: Zvese-Mu-Imwe Pamhepo Kuronga Zvebhizinesi Rako
Mugovera, October 24, 2020 NeChishanu, Gumiguru 23, 2020 Douglas Karr
Mabhizimusi ane sevhisi-based zvinopa zvinogara zvichitsvaga nzira dzekuita kuti zvive nyore kune vatengi kutenga kwavo masevhisi kana kuchengetedza nguva yavo. Chirongwa chekugadzwa kwekugadzwa senge Appointy inzira isina musono yekuzadzisa izvi sezvo uchikwanisa kupa zvirinani uye kuchinjika kwe24 × 7 kubhucha pamhepo pamwe neyakawedzerwa mabhenefiti ekuchengetedzwa kwepamhepo kwakachengeterwa, ziviso dzekubhuka ipapo, uye zero kaviri kabhucha.
Kwete izvozvo chete, chishandiso che-ese-chimwe senge Sarudza inogona zvakare kukubatsira iwe kubata bhizinesi rako zvinobudirira, kuongorora vashandi kugadzirwa, uye kukura bhizinesi rako neakakodzera ekushambadzira maficha.
Kugadzwa Pamhepo Kuronga: Solution Kuongorora
Sarudza iri online musangano kuronga software iyo inopa iri nyore-kushandisa chikuva chekubhuka pamhepo, zviine otomatiki zviyeuchidzo, kubhadhara kubhadhara, nharembozha, uye zvimwe zvakawanda! Iyo inokubatsira iwe kubata uye kukura bhizinesi rako nekuwana vatsva vatengi uye nekuchengetedza zviripo.
Vanopfuura mazana maviri emabhizinesi varidzi kubva kumaindasitiri akasiyana siyana senge kudzidzisa, salon, spa, hutano uye kugwinya, mabasa ehunyanzvi, hurumende neakazvimirira chikamu, mahofisi ekurapa, mashandiro ebhizinesi, uye zvikwata, nezvimwe - isa kuvimba kwavo muKusarudzwa.
Kugadzwa kunobatsira bhizinesi rako nezvikomborero zvinotevera:
24 × 7 Kubhuka kwepamhepo
NeKugadzwa, vatengi vako vanogona kuronga kugadzwa newe chero nguva, chero kupi, pavanenge vachida. Inoita senge 24 × 7 yekugamuchira, iyo inofambisa yako purogiramu uye inokuchengetedza kubva kunetswa yekuverengera manyore kugadzwa uchishandisa foni kana email. Vatengi vanogona kuwana rako rekubhuka peji pavari nyore. Zvakare, haufanire kunetseka nezvekushaikwa kumisangano yakatemwa kunze kwemaawa ako ebhizinesi!
Vatengi vako vanogona kuzvirongera zviri nyore neyakareruka nzira yekubhuka. Kana zvichidikanwa, ivo vanokwanisa kukanzura kana kuseta patsva musangano wavo mune imwe nyaya yemasekondi! Kugadzwa zvakare kunoita kuti iwe ugadzire rako rekubhuka peji kuti uenzane nemhando yako yemufananidzo.
Multi-Chiteshi Kutungamira Chizvarwa
Natsiridza bhizinesi rako rekuonekwa pamhepo uye uvepo kune ako vatengi - Google, Facebook kana Instagram! Kubatanidzwa kwekugadzwa kweAppointy kunobatsira iwe kuwedzera simba rezvenhau kuti uwane vamwe vatengi.
Uine Appointy, unogona kuwedzera bhatani re 'Bhuku Zvino' kuGoogle MyBusiness, Facebook, uye Instagram anobata kushandura vashanyi vane mbiri-vanobatana kuita vatengi vanobhadhara. Iri bhuku ikozvino bhatani rinoita kuti vashanyi vepa profiles varonge musangano pamwe nebhizinesi rako mukati meapp.
NeReserve yedu neGoogle kusangana, vatengi vako vanogona kukuwanira nekukubhuka zviri nyore kubva kuGoogle Tsvaga, Mepu uye RwG webhusaiti. Nenzira iyi, iwe unenge uchigadzira vatengi vatsva pasina kubhadhara dhi!
Kugadzwa kunoita kuti iwe utumire zviyeuchidzo kuburikidza neemail neSMS kune vako vatengi pamberi pegadziriro yekudzora isina-inoratidza uye yekupedzisira-kukanzura. Vatengi vako vanogona kuronga patsva nyore kana vasingakwanise kuzviita kana kuzivisa zvisati zvaitika kuitira kuti iwe ugone kuzadza nzvimbo dzisina chinhu uye usarasikirwe nechero mari.
Appointy inosanganisirwa neakakurumbira ekubhadhara maapplication sePaypal, Stripe, Square kupa pakarepo kubhadhara sarudzo kune vatengi panguva yekubhuka kana kubuda.
Iwe unogona kusarudza kubvuma kuzara, kusarudzika, kana kusabhadhara kwepamhepo panguva yekubhuka. Kubhadharisa kwepamhepo pamhepo kunogona kukubatsira kuti usabvumirane nekubhuka zvisina kujairika uye nekuchengetedza kudzima
Appointy's Square POS yekubatanidza auto-inozadza mamiriro ekugadzwa uye inovimbisa kukurumidza uye kutsetseka kuongorora nzira yevatengi vako.
Yechokwadi-nguva Kuronga Karenda
Appointy's-real-time kalendari inoita kuti iwe utarise yako zuva rehurongwa kamwe kamwe, uine akawanda masisitimu evashandi pane imwechete skrini. Ziva chero maburi uye zadza isina chinhu slot yekushandisa nguva zvakanaka.
Unogona kuchinja kuwanikwa kwako chero nguva kubva pakarenda. Zvakare, iyo inokutendera iwe kugadzirisa patsva nyore pamwe nekukweva uye kudonhedza ficha.
Appointy inotsigirawo nzira mbiri dzekubvumirana nemakenduru anozivikanwa ehunyanzvi kana ehunyanzvi seGoogle Cal, iCal, Outlook, uye nezvimwe kuitira kuti ugare uri pamusoro pehurongwa hwezuva rako.
Vashandi uye Vatengi Management
Kugadzwa kunoita kuti iwe upe vashandi vako zvitupa zvekupinda, izvo zvinovatendera kuti vatore kutonga kwavo, kuwanikwa, uye mashizha. Iyo inokubatsira iwe mukuchenjera manejimendi vashandi vako, nekumisikidza kugadzwa kune yakasununguka / yakabatikana sosi, uye inowedzera kugadzirwa.
Appointy's CRM inoita kuti iwe nevashandi vako mununure zvakasarudzika mutengi ruzivo nekutevera maitiro avo. Chengetedza zvakakosha zvakakosha senge fomu yekudyira mhinduro, chiitiko chegadziriro, nhoroondo yekutenga, zvinyorwa uye zvimwe munzvimbo imwechete.
Iwe unogona zvakare nehungwaru boka revatengi vako zvichibva pane zvakakosha hunhu senge chiitiko, mhinduro uye kuvimbika kutarisisa pane chaipo vatengi uye nekunyatso kugadzirisa maitiro ako.
NeAppointy yekugadzwa kubhuka app, unogona kubata rako rese bhizinesi pafoni yako. Chengetedza kuronga, kubhadhara, makarenda evashandi, kugadzwa, uye zvimwe zvakawanda kuburikidza neapp iri kuenda.
Kubatanidzwa kweAppointy neZoom kunoita kuti iwe uronge kubvunzana pamhepo, misangano iri kure, misangano, makirasi chaiwo, kana mawebhusaiti. Nenzira iyi iwe unogona kuwedzera bhizinesi rako kusvika munzvimbo dzakasiyana nguva, pasirese.
Yese yekubhuka auto-inogadzira Zoom yemusangano chinongedzo uye iyo chaiyo kirasi kana chikamu chinowedzerwa otomatiki kukerenda yako.
Ruzivo rwekugadzwa runoratidzwa pane peji rekusimbisa rekubhuka, uye rinotumirwa mumagetsi email / chinyorwa simbiso uye zviyeuchidzo kuziviso kune vese vatori vechikamu. Kuti ujoine, vatengi vanofanirwa kungobaya iyo Zoom link uye yavo Zoom app ichavhurwa!
Analytics & Kuzivisa
Appointy's analytics uye kuzivisa zvinobatsira iwe kuteedzera ako akakosha ekuita zviratidzo senge nhamba yekugadzwa, kugutsikana kwevatengi, kutengesa, kuita kwevashandi uye zvimwe munguva chaiyo-nguva. Gara nguva dzose pamusoro peyako mashandiro uye ita sarudzo dzinotungamirwa nedatha yekuvandudza aya metric ebhizinesi.
Set-up Sarudza bhizinesi rako mumatanho matatu akapusa:
Set - Isa masevhisi ako uye maawa ekushanda. Wedzera buffers, block nguva kuti utorezve yako chaiyo-yehupenyu hurongwa.
mugove - Govera yako yekubhuka peji URL nevatengi. Wedzera iyo kune webhusaiti yako, Google Bhizinesi Rangu, Instagram, Facebook, uye zvimwe zviteshi.
Bvuma - Gamuchira kubhuka kubva kune vatengi 24 × 7. Rega vatengi vazvirongedze, vadzokerezve, uye vadzime pazvavanowana.
Kugadzwa ndeimwe yevatungamiriri veindasitiri mune yekugadzwa kuronga domeini. Iine freemium yemutengo modhi, inotsigira mabhizinesi eese saizi. Iyo zvakare inovandudza yakasarudzika-yakagadzirirwa kugadzwa kuronga software inokodzera kune makuru mabhizinesi / mabhizinesi kuti vawane kune yavo tsika yekumaka uye yakatarwa yekuronga zvido.
Wagadzirira kukura bhizinesi rako neAppointy?
Tanga yako 14-Mazuva Ekugadzwa Muedzo Nhasi!
Tags: masanganokugadzakarendaonline kudomwa kurongaonline schedulerZoomzoom musangano